Fotodrafitrasan’ny Frankôfônia : ahodinkodina amin’ny lainga marivo tototra ny raharaha (NewsMada) | AEMW
Fotodrafitrasan’ny Frankôfônia : ahodinkodina amin’ny lainga marivo tototra ny raharaha (NewsMada)
« Mandroso tsara ny fanorenana fotodrafitrasa hanatanterahana ny Frankôfônia, misy aza vita aloha », hoy ny filoha Rajaonarimampianina nitsidika fanaovana fotodrafitrasa amin’ny fampiantranoana ny Frankôfônia, eny Ivato, ny faran’ny herinandro teo. Vita mialoha, ohatra, ny fanalehibeazana ny seranam-piaramanidina. Toy izany koa ny fanamboarana ny trano fandraisana eny Ivato. Na ny lalana atao aza, ho vita mialoha.
« Tsy misy tsy vita izany ireo », hoy izy. Manao fanamby hampandroso ny firenena isika. Ireo eritreretina hoe tsy vita, tsy fanamby ao anatin’ny bokin’andraikitra ny fikarakarana ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia. Fa mba hampandroso sy hanatsara ny tanàna, atao fotodrafitrasa lehibe. Mety hanaovana trano maro samihafa io fa tsy ao anatin’ny bokin’andraikitra, raha ny fanazavany.
« Eo akaikiny, misy hoe « Village de la francophonie »: efa mandeha izy io… Iray na roa volana, ho hita ny endriny eo rehefa avy eo », hoy ihany izy. Tsy i Frantsa akory ny Frankôfônia. Izay manahirana ny sasany amina tany iray any, azy izany. Miteraka fampandrosoana io, mahatonga ny fahafantaran’ny olona an’i Madagasikara, ary ivelarantsika eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.
Tsy misy fangaraharana izay atao
Tsy ny « Village de la francophonie« , Andohatapenaka, ve no hoe tsy vita? Na ny tetikasa « Village Voara », misy trano, foibem-barotra, fialamboly, tontolo maitso… Vao tamin’ny herinandro no nikoropahana nandrava tranona mpiasam-panjakana tsy lavitra izany ny fitondram-panjakana.
Amin’izany no hoe hananganana tranoheva ho an’ny mpanao asa tanana, fa tsy vita izay nokasaina ho amin’izany. Koa inona ity hoe « Village de la francophonie » efa mandeha? Fanamby hampandroso firenena aorian’ny fihaonana an-tampony, 22-27 novambra 2016, ny « Village de la francophonie« … vao ho vita?
← Andohatapenaka : tsy eken’ny mponina ny fandravana (NewsMada)
Fampiharana ny sori-dalana : tonga eto indray i Chissano (NewsMada) →